Famokarana: ilay Rubrik "Haingam-bola, Tsotra, Tsara" Martech Zone
Raha mbola nisy ny mpitantana ny tetikasa dia nisy tetika haingana sy maloto tamin'ny famaritana ny tetikasa rehetra. Nantsoina hoe ny lalàna “Fast-Cheap-Good”, ary haharitra dimy segondra eo vao ho azonao.
Ity ny fitsipika:
Haingam-pandeha, mora vidy na tsara: Misafidiana roa.
Ny tanjon'ity lalàna ity dia ny hampahatsiahy antsika fa mitaky ezaka sarotra ny rehetra varotra varotra. Isaky ny mahazo tombony amin'ny faritra iray isika, dia tsy isalasalana fa hisy fatiantoka any an-toeran-kafa. Ka inona no dikan'ny hoe mpamaky Martech? Andao hiaraka ny zava-drehetra.
Ny dikan'ny fifadian-kanina, mora vidy ary tsara
Manana fahatsapana hafainganana isika rehetra. Faran'ny herinandro hazakazaka eto Indianapolis, ary ny fiara haingana indrindra no mandresy. Na inona na inona tetik'asa ezahanao tanterahina, na ny fanapahana ny bozaka na ny fitsidihana ny volana, dia samy maniry ny hahavitana izany faran'izay haingana. Mazava ho azy, indraindray tsy ny zava-drehetra ny hafainganana. Ny sasantsasany amin'ireo fialantsasatra tsara indrindra dia ireo izay iandrasantsika maharitra. Ny sasany amin'ireo vokatra mahomby indrindra dia ireo izay tsy niahiahy ny mpamorona ny hanao tsena aloha fa ny asa tsara kokoa. Ary matetika, very maina ny loharano. Rehefa dinihina tokoa, ny fiara Indy ihany no mahazo 1.8 MPG.
Ary azo antoka, tsara ny mitahiry vola. Azonao atao ny miantso tafika mpilatsaka an-tsitrapo sy mpampiofana hanandrana hamokatra zavatra iray, ary matetika dia mahazo valiny mahagaga. Na izany aza, amin'ny fampihenana ny vidiny dia atahorana ihany koa ny fahafoizantsika ny kalitao. Ny fikarohana ireo toerana rehetra ireo mba hitehirizana dia mitaky fotoana. Farany, ny fomba hahazoana vokatra tsara indrindra dia ny miantoka fa tsy misy fotony ny fotoana sy ny vola. Ny asa avo lenta indrindra dia misy foana rehefa manana loharano tsy manam-petra eo am-pelatanantsika isika.
Haingam-pandeha, mora vidy, tsara ary mamokatra
Indraindray ity fitsipika fehiloha ity dia toa miharihary. Fantatsika rehetra fa misy ny varotra varotra amin'ny tetikasa rehetra. Nefa, toy ny Doug Karr nanondro fotsiny, Mampijaly ny tombana ny tetikasa. Izany dia satria ny mpanjifa dia hametraka antsika hatrany amin'ny fandriky ny fiezahana hanolotra zavatra izay haingana, mora ary tsara amin'ny fotoana iray.
Tsy azo atao izany. Izany no antony mahatonga ny fetr'andro farany, ny tetik'asa dia mandany teti-bola ary mijaly ny kalitao. Mila manao varotra varotra ianao.
Tsy maninona ny haben'ny tetik'asa, ny fitsipika haingana-mora dia sarobidy. Raha mpamorona sary miasa ao amin'ny Photoshop ianao dia afaka manangona fotoana amin'ny tsy fitazonana ireo sosonao misaraka sy milamina. Raha manandrana mampihena ny vidiny amin'ny marketing amin'ny mailakao ianao dia afaka mahafoy kalitao amin'ny fanandramana manao azy ao an-trano (na sorona ny hamehana amin'ny alàlan'ny fampiasana mpamatsy mailaka ivelany.) Raha tsy mampaninona anao ny typo vitsivitsy amin'ny lahatsoratranao, handray soa ianao amin'ny famokarana azy haingana kokoa ary tsy lafo. Mora hita ny varotra varotra.
Ao amin'ny biraonao manokana, azonao atao ny mampiasa ny fitsipika haingana-mora-tsara mihoatra ny fanapahan-kevitra fotsiny. Azonao atao koa ny mampiasa azy io amin'ny fifandraisana amin'ireo mpandray anjara. Rehefa mangataka asa hatao ny olona avy hatrany, azonao atao ny manontany azy ireo raha aleon'izy ireo mahafoy kalitao na handoa ny vidiny mitombo. Raha misy te hahalala momba ny safidy lafo vidy kokoa dia anontanio izy ireo raha aleon'izy ireo mahita ireo safidy mampifandray ny tahiry amin'ny endri-javatra vitsy kokoa na amin'ny tsingerin'ny fampandrosoana lava kokoa.
Azonao ilay hevitra. Mampiasà mora vidy-mora! Ity dia fomba mahery vaika hahatakarana ny toetoetran'ny fitantanana ny tetikasa, ny famokarana ary ny fifandraisan'ny mpiray antoka.
Tags: levitrafifadian-kaninahaingana mora vidytsaravidinykalitaon'ny hafainganam-pandehafamokaranakalitaosokajyhafainganam-pandeha
WordPress: Mamoaha lahatsoratra ho avy toy ny hetsika ho avy